MCU မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
Marvelဘာဖြစ်လဲ ... ? အခြား LEGO minifigure သေးသေးလေးကိုစျေးနှုန်းမြင့်တက်စေနိုင်သည်
18 / 09 / 2021 18 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 66 Views စာ 1 မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76100 တော်ဝင် Talon တိုက်လေယာဉ်တိုက်ခိုက်မှု, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Black က Panther, အုတ်ခဲ, Killmonger တဲ့, Lego, Lego မှ marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Marvel စတူဒီယို, MCU, အလယ်တန်းစျေးကွက်, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ် Marvel စတူဒီယိုရဲ့ကာတွန်းကားကဘာဖြစ်မလဲ…? ဇာတ်လမ်းတွဲသည်သူ၏ဇာတ်ကောင်ကိုပြန်ဖြစ်စေသည်ကိုမြင်သည်
06 / 09 / 2021 07 / 09 / 2021 Rachael ဒေးဗီးစ် 125 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, LEGO Group, LEGO.com, Marvel, MCU, စကခ, အဆိုပါ LEGO Group, ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ, WandaVision, အဖြူရောင်အမြင်
05 / 09 / 2021 05 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 111 Views စာ0မှတ်ချက် 76176 ဆယ်ကွင်းမှလွတ်မြောက်, 76177 ရှေးကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲ, အသေသတ်ခြင်းကိုကားရောင်းဝယ်ရေး, Katy, Lego, Lego မှ marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, မောရစ်, သင်တုန်းလက်သီး, Shang-Chi, Shang-Chi နှင့်ဆယ်ပါးလက်စွပ်၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ, Wenwu, Xialing
04 / 09 / 2021 04 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 125 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76060 Doctor Strange ၏ Sanctum Sanctorum, ၇၆၁၀၈ Sanctum Sanctorum Showdown, 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Lego, Lego မှ marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Marvel စတူဒီယို, MCU, Reddit, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
04 / 09 / 2021 05 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 179 Views စာ0မှတ်ချက် 76007 Iron Man: Malibu Mansion တိုက်ခိုက်မှု, 76008 Iron Man vs. Mandarin: Ultimate Showdown, စျေးဝယ်, အုတ်ခဲ, သံမဏိလူသား, Iron Man 3, Lego, Lego မှ marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, အလယ်တန်းစျေးကွက်, Shang-Chi, Shang-Chi နှင့်ဆယ်ပါးလက်စွပ်၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ, Mandarin, Trevor Slattery
03 / 09 / 2021 03 / 09 / 2021 Rachael ဒေးဗီးစ် 134 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, LEGO Group, LEGO.com, Marvel ကာကွယ်သူများအတွက်, MCU, အဆိုပါကာကွယ်သူများအတွက်, အဆိုပါ LEGO Group
01 / 09 / 2021 01 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 185 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
01 / 09 / 2021 28 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 89 Views စာ0မှတ်ချက် 71031, 71031 Marvel စတူဒီယို, မိကျောင်း Loki, Captain America, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, Spider-Man, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Throg, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ…?